Komishanka: Ha Is Dilina, Somaliland-na Ha Isku Dilina Faaqidaadda Muuse Jaambiir
Tuesday October 03, 2017 - 18:27:33 in Maqaallo by Wariye Tiriko
13 novembar 2017 waa maalin tirsiimadda inaga xigtaa yar tahay. Maalintan waxa Somaliland ka dhacaya doorasho madaxtooyo oo ay hogaaminta dalka ugu beretamayaan saddex Murrashax. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi(Cirro), Muuse Biixi Cabdi iyo Faysal Cali Waraabe waa saddexda nin ee ummadda milaygan hor-taagan. Mid kastaaba wuxuu doonayaa inuu Madaxweyne u noqdo Somaliland. Mid waliba xaq Dastuuriya buu u leeyahay doonistiisa. Hadday isu hayaan iyagu ismay lurreen, balse midna isuma hayo. Midna ka kale lama jecla wuxuu doonayo, balse Dadkaa la kala jecel oo tiradooda loo kala badinayaa.
Haatan midna si cad uma oga dadka inta raaci doonta, kamase odoros la'a waxa maalintaasi u soo siddo. Kama werwer la'a sida maalintaa wax u dhici doonnaan, laakiin midna ma oga inuu calafkaa leeyahay iyo in aanuu lahayn oo qaybka Allaa leh, isla markaana og sedba ruuxuu siinayo. Hase-ahaatee, mid kastaaba wuxuu sugayaa natiijada maalintaa ka soo baxda, taasaa kala saari doonta, kii lehna siin doonta, kaan lahayna u sheegi doonta.
Hayeeshee, haatan hilaadinta maxsuulka maalintaa soo bixi doona kama sii hadli karno, waxse daymada iyo dhugashadu taagan tahay waxa immika socda. Eegga waxa kaambiga inagu soo haya ololihii doorashada oo si rasmi ah loo guda geli doono maalmaha soo fool leh ee bisha soo socota ee Oktoobar. Inkastoo tagtadii dhawaydba aanay khaladaad la'ayn, haddana marxaladani waa ta ugu xaasaasisan ee loo baahan yahay in feejignaan xoog leh loo yeesho. Muwaaddin kasta masuuliyad baa ka saaran ilaalinta amniga, ka qayb qaadashada ollolaha iyo codayntaba. Gaar ahaan sadexda murashax waxa xil culusi ka saaran yahayilaalinta dhaqanka Xisbigiisa iyo Taageerayaashiisa. Waxa looga baahan yahay inay Kaaddiriinta Xisbiyaddooda uga digaan Carrabka Xanaf leh ee sharka kicin kara, Taageerayaashoodana ay ka afwaajiyaan ficil gurracan oo wax u dhimi kara xasilloonida doorashada iyo nabadgelyada guud. Waayo qallooca waa layskaga dayan karraa haddaan la xakamayn.
Kaambaynka ka hor haddii Xisbi meel tago oo uu munaasibad ku leeyahay, maaha in Xisbi kalebarbar carraro isla amintaa, iskuna dayo inuu carqaladeeyo hawsha xisbigaa kale. Taa waxa ka haboon in xisbi waliba markiisa kalsooni la hortago bulshada iskana iibiyo, sababtoo ah habkii kale ee umadda wax lagaga doonnaaba waa kalsooni darro. Sidaa darteed, waxa muhiim ah in xisbi waliba u hogaansamo sharciga, isla markaana uu Isagu isxakameeyo ee aanuu sugin inta lagu odhanayo 'jooji khaladka'
Marka taa laga gudbo cidda laga rabo inay gaabsiga iyo gujo maalka ka jirto hanaanka doorasho waa Komishanka. Waa 7 xubnood, lix nin iyo gabadh, iyagaa laga rabbaa inay ku illaaliyaan xisbiyada sharciga iyo nidaamka doorashada. Todobadaa qof ayay saaran tahay masuuliyadda rasmiga ahi, iyagaa garsoore ka ah, maalintaa taladdeeda leh, xumaan iyo samaanba wixii ka yimaadda loo raacayaa. Hadday masuuliyaddooda badhax la'aan u gutaan baylah iyo ba' la filan maayo, laakiin hadday awooddooda garan waayaan oo ay ka habradaan isticmaalkeeda ama cid kale la wadaagto doorashadu gacantooday ku dhimanaysaa. Musuq uu kii ka garsoorayay sameeyay na waa halista keliya ee looga baqayo doorashada. Taa macnaheedu maaha Komishanku sidaa yeeli maayaan ee sidaa kallay yeeli doonnaan, balse waxa weeye labadaa siyood midkood uun bay wax u dhici karraan.
Dhanka ra'yul caamka guud marka la eeggo, ra'yiga waa lagu kala qaybsan yahay. Qaar badan oo ka mid ahi waxay u nisbeeyaan xubnaha komishanka jilicsanaan iyo in aanay sidday tahay u fahamsanayn awooddooda. Qaybo kalena waxay ku tilmaamaan guddi hawshooda ka adag oo iska difaaci karra wixii masuuliyaddoda xumayn karra. Labaddaa mid ay ku dambaynba, haddana fulle xantii ma mooga oo Iyaga laftoodu kama dareen la'a aragtida laga qabo, balse isuma arkaan wayd aan waafi ahayn.
Dabcan, kursi waa kursi, isagu macno isuma yeelo ee hadba ruuxa ku fadhiista ayaa awooddiisa billa' ama tirra. Sidaa darteed tuhunkuna ma sabab la'a, toodduna ilaa imika ma markhaati la'a. Mar tusaale loogu soo qaatay komishanka doorashadii fashilantay ee Kenya, way ka gilgisheen guddigu. Waxay ka bixiyeen jawaab adag oo u dhacaysay, in aan lala masayn kuwaa, isla markaana waxay ku dhawaaqeen doorashada Somaliland in aanay la mid noqonayn tii Kenya.